prabhu bank limited(prabhu bank limited) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
प्रभु बैंकको सेयरभाउ बढेमा कतिसम्म पुग्ला ? (प्राविधिक विश्लेषणसहित)
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । यो साता सेयर बजारले नयाँ उचाइ चुमेको छ। कारोबारमा पनि उछाल आएको छ। बजारमा ६७ अर्बभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ। यसले बजार बुलिस रहेको बुझ्न सकिन्छ। बजार बुलिस नै रहे पनि अझै पनि कतिपय कम्पनीका सेयरमूल्य अन्डरभ्याल्यू नै छन्। विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय सेक्टरमा सोचेजस्तो बढोत्तरी हुन सकेको छैन।...
प्रभु बैंकको रु. ४ अर्बको ऋणपत्रमा आवेदन दिने समय लम्बियो
काठमाण्डौ । प्रभु बैंकको ४ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्रमा आवेदन दिने समय लम्बिएको छ। बैंकले गत जेठ ११ गतेबाट रु. १ हजार अंकित दरका कुल ४० लाख इकाइ भएको ‘प्रभु बैंक डिबेन्चर २०८७’ निष्कासन गरेको छ। कुल इकाइमध्ये २४ लाख इकाइ व्यक्तिगत तबरबाट र बाँकी १६ लाख इकाइको सार्वजनिक निष्कासन गरिएको हो। अब यो ऋणपत्रको निष्कासन बन्द जेठ २६ गते...
प्रभु बैंकको रु. ४ अर्बको ऋणपत्रमा आवेदन खुला, कति पाइन्छ ब्याज ?
काठमाण्डौ । प्रभु बैंकको ४ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्रमा आज (जेठ ११ गते) बाट आवेदन खुला गरिएको छ। बैंकले रु. १ हजार अंकित दरका कुल ४० लाख इकाइ भएको ‘प्रभु बैंक डिबेन्चर २०८७’ निष्कासन गरेको हो। कुल इकाइमध्ये २४ लाख इकाइ व्यक्तिगत तबरबाट र बाँकी १६ लाख इकाइको सार्वजनिक निष्कासन गरिएको छ। सार्वजनिक निष्कासन गरिएका कुल १६ लाख...
भोलिबाट प्रभु बैंकको रु. ४ अर्बको ऋणपत्रमा आवेदन खुल्ने, ब्याज कति ?
काठमाण्डौ । प्रभु बैंकको ४ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्रमा भोलि (जेठ ११) बाट निष्कासन हुने भएको छ। बैंकले रु. १ हजार अंकित दरका कुल ४० लाख इकाइ भएको ‘प्रभु बैंक डिबेन्चर २०८७’ निष्कासन गर्ने भएको हो। कुल इकाइमध्ये २४ लाख इकाइ व्यक्तिगत तबरबाट र बाँकी १६ लाख इकाइको सार्वजनिक निष्कासन गरिनेछ। सार्वजनिक निष्कासन गरिने कुल १६ लाख...
प्रभु बैंकको रु. ४ अर्बको ऋणपत्र जेठ ११ बाट निष्कासन हुने, ब्याज कति ?
काठमाण्डौ । प्रभु बैंकले आउँदो जेठ ११ गते बाट ४ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ। बैंकले रु. १ हजार अंकित दरका कुल ४० लाख इकाइ भएको ‘प्रभु बैंक डिबेन्चर २०८७’ निष्कासन गर्ने भएको हो। कुल इकाइमध्ये २४ लाख इकाइ व्यक्तिगत तबरबाट र बाँकी १६ लाख इकाइको सार्वजनिक निष्कासन गरिनेछ। सार्वजनिक निष्कासन गरिने कुल १६ लाख...
प्रभु बैंकद्वारा निष्क्रिय कर्जामा व्यापक सुधार, नाफा ४४.०८%ले बढ्यो
काठमाण्डौ । निष्क्रिय कर्जामा व्यापाक सुधार गरेको प्रभु बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार बैंकको यो नाफा गत वर्षको यही अवधिसम्मको तुलनामा ४४.०८ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकले १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको...
काठमाण्डौ। प्रभु बैंक लिमिटेडले आप्mनो शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा आज बुधबारदेखि नुवाकोट जिल्लाको वेलकोटगढी नगरपालिका–७ स्थित महादेवफाँटमा २१४ औँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ। बैंकको महादेवफाँट शाखा कार्यालयको उद्घाटन प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेशका मुख्य सचेतक केशवराज पाण्डेले गरेका छन्। पाण्डेले प्रभु बैंकले आफ्नो बैंकको...
काठमाण्डौ । प्रभु बैंक लिमिटेडका नवनियुक्त अध्यक्ष लीलाप्रकाश सिटौलाले पदभार ग्रहण गरेका छन्। सिटौलाले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष आइतबार पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गरेका थिए। सोही दिन सञ्चालक समितिको २०९ औँ बैठकको अध्यक्षता गरी सिटौलाले पदभार ग्रहण गरेका हुन्। बैंकको स्वतन्त्र सञ्चालकका रुपमा रहेका...
काठमाण्डौ । प्रभु बैंकले आफ्नो सेवा विस्तार गर्ने क्रममा काठमाण्डौस्थित विशेष अदालत परिसरमा एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ। विशेष अदालतमा स्थापित एक्सटेन्सन काउन्टरबाट आज शुक्रबारदेखि कारोबार सुरु भएको हो। एक्सटेन्सन काउन्टरको बिहान १० बजे विशेष अदालतका न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीबाट एक समारोहबीच उद्घाटन गरिएको...
स्वतन्त्र सञ्चालक लीलाप्रकाश सिटौला बने प्रभु बैंकको अध्यक्ष
काठमाण्डौ । प्रभु बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा लीलाप्रकाश सिटौला चयन भएका छन्। बैंक सञ्चालक समितिको हिजो बिहीबार बसेको बैठकले सिटौलालाई अध्यक्षमा चयन गरेको हो। उनी बैंकका स्वतन्त्र सञ्चालक हुन्। गत चैत २३ गते सिटौला बैंकको स्वतन्त्र सञ्चालकमा नियुक्त भएका थिए। उनी नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश...
कलेजका विद्यार्थीलाई प्रभु क्यापिटलको सेयर बजार तालिम
काठमाण्डौ । प्रभु क्यापिटल लिमिटेडले राजधानी कलेजमा एमबीएमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि सेयर बजारसम्बन्धी एकदिने प्राविधिक विश्लेषण वर्कसप तथा तालिम कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। हिजो शनिबार सम्पन्न तालिममा एमबीएका करिब ३० जना विद्यार्थीको सहभागिता थियो। संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सेयर सचेतना अभिवृद्धिका लागि प्रभु...
औषधी व्यवसायी र प्रभु बैंकका बीच बैंकिङ साझेदारी
काठमाण्डौ । नेपाल औषधी व्यवसायी संघ लुम्बिनी प्रदेश र प्रभु बैंक लिमिटेडबीच बैंकिङ साझेदारी सम्झौता सम्पन्न भएको छ। आज एक कार्यक्रमबीच संघ र बैंकबीच सम्झौता भएको हो। सम्झौता कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगरका मुख्य निर्देशक सुदीप फुयालले क्यूआर कोड तथा डिजिटल बैंकिङको महत्व तथा फाइदाहरु बारे जानकारी गराउँदै औषधि...
प्रभु बैंकद्वारा विद्यार्थीलाई बैंकिङ ज्ञान प्रदान
काठमाण्डौ । प्रभु बैंक लिमिटेडले आज सोमबार सिन्धुपाल्चोकका स्कुले विद्यार्थीहरुलाई बैंकिङ ज्ञान प्रदान गरेको छ। सिन्धुपाल्चोकको तेर्षे माध्यामिक, श्रीमहेन्द्र माध्यामिक, श्रीपाल्चोक माध्यामिक र भुमेश्वरी माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ७, ८ र ९ मा अध्ययनरत ४८ जना विद्यार्थीले बबरमहलस्थित बैंकको प्रधान कार्यालयमा अवलोकन भ्रमण गरी...
काठमाण्डौ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको तालमराङ गाउँपालिकास्थित तेर्षे माध्यामिक र बतासे माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ७, ८ र ९ मा अध्ययनरत ५० जना विद्यार्थीले आज आइतबार प्रभु बैंक लिमिटेडको बबरमहलस्थित प्रधान कार्यालयमा अवलोकन भ्रमण गरी बैंकिङ साक्षरता तथाज्ञान हासिल प्राप्त गरेका छन्। बैंकको प्रधान कार्यालय र बैंकबाट सञ्चाल...